Amathiphu Wokuhamba Ukuvakashela uJulian, California
I-united states California I-San Diego
Ukuvakashela uJulian, eCalifornia: Yini Okumele Uyenze Nenze
UJulian unamapayi e-apula, izintaba kanye nokujabulisa okuncane kakhulu kwedolobhana
I-Julian itholakala ngamamayela angu-60 enyakatho-mpumalanga yeSan Diego ephakathi kwesiphetho esenyakatho yeCuyamaca Mountains nomthamo oseningizimu weVolcan Mountain, entshonalanga yehlane lase-Anza Borrego. Kuye ngomgwaqo nokuthi iyiphi indlela oyithathayo, cishe umjikelezo wamaminithi angu-60-90 ukusuka enkabeni yeSan Diego.
Kungani uJulian efanelwe ukuvakashelwa?
I-Julian iyidolobha elincane lentaba elinika iSan Diegans ukunambitheka kwempilo yasemaphandleni, intaba esingajwayelekile kuyo.
Kwalabo ababejwayele ukugaya, isanti nesihlahla sesundu, kusinika ithuba lokuthola ama-oak kanye namahlathi e-pine nomoya omusha wezintaba.
Kungani kuthiwa igama elithi Julian nokuthi yimuphi umlando walo?
Ama-veteran empini, ababalekile empini, bahamba entshonalanga befuna indawo yokuqala impilo entsha. Phakathi kwabo kwakungumzala wakhe uDrue Bailey noMike Julian, owathola intaba ephakathi kweVolcan Mountain neCuyamacas ekuthandweni kwabo. Ngawo lowo nyaka igolide latholakala emfuleni omncane kaFred Coleman. Kwakungokuqala kokuqala kwegolide kweSan Diego County. Idolobha lalibizwa ngeJulian, ngokuhlonipha uMike, owabe esekhethwe kamuva eSan Diego County Assessor.
Yini eyenziwa ngoJulian namuhla?
Lapho izimayini zifa, abahlali bafika ezweni ukuze baphile. Isimo sezulu sezintaba sabonakala sihle kakhulu ngama-apula, futhi izinsimu zezithelo zezithelo zazungezile edolobheni. Namuhla, uJulian udume ngama-apula alo kanye nama-pie kanye ne-cider ukuthi izithelo zikhiqiza.
Lokhu kusiza lo dolobha ukwenza ibhizinisi elivakashile elinempilo.
Ingabe iqhwa ku-Julian?
U-Julian ungenye yezindawo eziyinhloko eSan Diego County ukuthi izakhamuzi ziqala lapho kuneqhwa. Uma igama liphuma ukuthi liqhwa ku-Julian, cishe cishe kuneqhwa kuyo yonke indawo yezintaba. Ngamamitha angu-4,235, ukuphakama okuphezulu kukaJulian kunikeza umoya ohlanzekile, isibhakabhaka esibhakabhakeni nezinkathi ezine ezihlukene.
Ukupaka kokuqala okubandayo kubangela ingubo yombala njengoba izihlahla zilungiselela ubusika beqhwa eliphansi. I-sledding ne-snowball fun engeza kwimisebenzi yonyaka.
Yini okufanele iyenze kuJulian?
Okunye ngaphandle kokuba nje indawo enhle yokuvakashela, ungakwazi ukugibela isikhungo esincane sendawo bese uthenga ezitolo ze-antique nabanye abathengisi. Ungathatha indawo enokuzungezile ngokuhamba ngezinyawo noma ngehhashi. Ungakwazi ukujabulela izingosi zomlando eziseduze nedolobha. Ungakwazi ukuchitha ngempelasonto futhi nje uphumule kwenye yezindiza eziningana nezokungcebeleka noma izintana. Ungakhetha ama-apula akho komunye wemithi yezithelo zendawo noma ukunambitha iwayini ezindaweni zokudlela ezihlala kuyo. Futhi kufanele uthenge umphayi we-apula wasekhaya.
Ingabe ama-apula wendawo asetshenziselwa ama-pie ase-Julian?
Ukuwa (uSepthemba kuya kuNovemba) yisikhathi se-apula kuJulian. Lesi yisikhathi lapho ama-apula asendaweni avame ukusetshenziselwa amakhekhe ase- Julian apula . Futhi yisikhathi esihle sokuvakashela enye yezithelo zemifino zendawo ukuze ukhethe ama-apula akho (hlola iwebhusayithi ye-Julian Chamber of Commerce ukuze uthole uhlu lwezithelo zezithelo) noma uthenge i-apple cider yakhiqizwa endaweni yangakini.
Ngifinyelela kanjani kuJulian?
Kusuka ezindaweni zaseSan Diego: thatha i-I-8 East ukuya ku-Highway 67 (ngaseRamona). 67 iyaba ngu-78 eRamona, ilandele uJulian, noma ithathe i-I-8 East ibe ngu-79 (ngeCuyamaca State Park) ibe yiJulian.
Kusuka ezindaweni ze-LA nase- Orange County : uthathe ama-5 noma ama-15 eNingizimu ukuya ku-76 ukuya ku-79, uphendukela ngakwesokudla kuya ku-78/79 (i-Santa Ysabel) uye ngakwesokunxele uye ku-Julian, noma uthathe u-5 noma u-15 eNingizimu ukuya ku-78 ukuya ku-Julian.
Ukuwela i-US-Mexican Border ibe yiTijuana
Okufanele Ukwenze Ngosuku Esibhishi LaseLa Jolla Shores
ISan Diego ngoJanuwari
Amathikithi ase-Legoland California
Umgogodla noNyoka eSan Diego
Izinto Okufanele Uyenze eSan Diego Ngaphambi Kokufa
Usuku Oluhle Lwezinsuku zase-Italiya Uhambo Oluvela Venice
I-Manoribel: I-Beach Getaway Yokuthula Enokuthula eduze ne-Mumbai
I-Block Island Car Ferry
Saint John Paul II Shrine National eWashington DC
I-Vancouver Spot Prawn Festival
Indlela Yokusebenzisa Amama Akho: Okokuqala, Ibhizinisi, Umnotho We-Premium, noMqeqeshi
Finyelela ku-11 Complex Sports e-Phoenix, AZ
Izindawo Ezidume Kakhulu Ukuvakashelwa eSpain
Kungani Amaqabunga Ashintsha Umbala Ekuwa?
Izipho ezingcono kakhulu kanye nezicathulo zokulondoloza ama-Campers
Amahhotela e-Hong Kong Ane-View View
Isivolontiya Isikhathi Seholide
Okufanele Ukwazi Ngeziqephu Esibusweni
Umhlahlandlela Wakho Womuntu ku-Apple Store kuManhasset